I-Testimonials Archive - Izakhiwo Nezindlu ze-NJ & NY, i-Selectate, Defence Defence ne-Bankruptcy Lawyers
Lokho Abantu Abakushoyo
Ikhaya / nobufakazi
Bobabili uPeter noVeer bobabili bebekhuthele kakhulu futhi ngokushesha nezimpendulo zabo zemibuzo yethu. Abagcinanga nje ngokuqiniseka ukuthi sithola impendulo yemibuzo yethu kodwa ulwazi oluyiqiniso balunikezwa ukwenza isinqumo esingcono. Kuhle.
Ngaphathwa ngenhlonipho futhi ngagcina ngisesimweni ecaleni lami. Kwakuyisinqumo esihle kimi ukuqasha ummeli kule nkampani. Great futhi ngizobabuye ngibancome.
U-Y'all wenze umsebenzi omuhle kakhulu ngiyabonga kakhulu uma noma ngubani edinga ummeli nakanjani awuthumele ku-firm.
Wonke umuntu obandakanyeka ecaleni lami wayelalelisisa, efundisa kakhulu futhi eyazi kakhulu okusize ukuthi ngenze ngizizwe nginethemba elikhulu kakhulu ekwenzeni izinqumo zami. Uzoba sezandleni ezihle noPatel, uSoltis noCardenas!
Ngaphathwa ngenhlonipho yiwo wonke umuntu e-PATEL, SOLTIS NO CARDENAS. Ngaso sonke isikhathi ngihlala ngilungiswa ecaleni lami yebo. Isinqumo esihle kakhulu! Isipiliyoni sami sokumelwa yi-PATEL, SOLTIS NO-CARDENAS singachazwa kuphela ngokuthi “Ukusiza okusheshayo nokunamandla okudingakalayo”
Ngithathe isinqumo esihle ngokuqasha i-Attorney Cardenas kanye nefemu. Babengabantu abahamba phambili ukuphatha icala lami. Ngingasho ukuthi uMmeli uCardenas nenkampani yakhe bazobe bengummeli wakho necala lakho.
Ngifisa ukuthi ngabe anganikeza eminye imininingwane mayelana nenqubo yonke. Bekunokunye okufanele ngikwenze kuGoogle futhi ummeli wami akazazi izimpendulo ezithile. Kuhle
Zinhle, bengizosezisebenzisa futhi uma zidingeka.
Intengo yayinengqondo- Mnu. USoltis wayehlala ephendula ama-imeyili ami nemibuzo- wayewusizo olukhulu futhi wenza inqubo ibelula. Kuhle kakhulu
Nakanjani !!! Inkonzo enhle kakhulu !!! Njengoba ngishilo ukuthi lo mthetho Firm awusebenzisi mina kuphela… kodwa nami… ungigcina ngivuselelwa futhi ungiluleka okufanele ngenze phambili. Uchwepheshe omuhle kakhulu futhi onolwazi kakhulu kimi. Ngijabule kakhulu futhi ngizimisele ukuncoma inkampani yami yomthetho kwabangane bami bomndeni wami. Ngiyabonga.
Ngaphathwa ngenhlonipho enkulu futhi ngangijabule kakhulu ngomphumela nenkonzo.
UDerek Soltis wayengummeli owangimelela ecaleni lami, futhi wayemane emangalisa. Wayehlala akhona emniningwaneni wakhe, aphendule yonke imibuzo yami, engagijimeli lutho, futhi angenze ngizizwe ngikhululekile kulokho okuwumfuziselo okhuthaza ukukhathazeka ngokujwayelekile. Ngasijabulisa kakhulu isinqumo sami sokusebenzisa le nkampani yezomthetho. Ngingancoma le nkampani yezomthetho, futhi ngqo uDerek Soltis kunoma ngubani ocele ukumelwa ngokusemthethweni odabeni abalukhahlayo. Uzophathwa ngenhlonipho, uzwela, futhi uzozizwa uqiniseka ekukhetheni okwenzayo ngoba uzoba nalo lonke ulwazi oludingekayo ukwenza isinqumo esihle.
Wenza kahle futhi wangimelela kahle. Ngingamncoma.
Ngizwe isinqumo esikhulu esiza kuwe. Konke, kufaka phakathi konke engikukhethile, kwakubhalwe ngokucacile ngesiNgisi esicacile, futhi yonke imibuzo yami yaphendulwa ngasikhathi sinye noma ngamahora ambalwa, futhi ngangivame ukufungiswa kuze kube yimanje kukho konke. Ngingasho ukuthi ungazikhohlisi, woza kuwe ngoba uyazi ukuthi wenzani futhi ngaphandle kokuthi ungochwepheshe, unekhono lokwenza konke kube lula futhi ukulichaza ngesiNgisi sobala hhayi imibandela yezomthetho ebekiwe, futhi imibuzo yakho ihlala iphendulwa ngokushesha.
Ngaphathwa ngenhlonipho, ngalungiswa kuze kube yimanje ngecala lami, futhi ngazizwa ngikhululekile ukuthi ngithathe isinqumo esihle sokuqasha lo mmeli. Ummeli wami unakekela yonke imininingwane futhi ubengigcina ngisesikhathini futhi ngikwazi kahle ukuthatha izinqumo ezifanele. Sekukonke, bekuyisipiliyoni esihle kakhulu, esimnandi kakhulu.
Ngaphathwa ngenhlonipho enkulu kakhulu. Ngibonge kakhulu ngemisebenzi yabo. Kuhle! Kuncoma kakhulu!
U-Becky Jones - Isibuyekezo se-Google
Ngisanda kungena ocingweni noDerek Soltis futhi ngihlabeke umxhwele futhi ngiyabonga ukuthi ngamthola. Benginemibuzo embalwa yokuqala ngaphambi kokuthi ngize kuye futhi wayiphendula ngobuqotho. Akusibo bonke abameli abazobe bethembekile uma kukhona okuthile okufanele kuqhubeke phambili… .kodwa uDerek uthembekile kakhulu futhi ungenze ngakhululeka kakhulu. Ngingancoma kakhulu leli hhovisi lezomthetho lisuselwa engxoxweni yami noDerek. Unomusa, uthembekile, uyacacisa, futhi uyakhathala. Manje ngithemba ukuthi kwenzeka okuthile lapho ngidinga ukuqasha khona ummeli ngoba nakanjani ngizowuqasha uDerek. Ngibonga kakhulu ngeseluleko sakho Derek! Imboni yezomthetho idinga abameli abaningi njengawe 🙂 Isibuyekezo esivela kwaGoogle